कोरोना संकट ः एउटा युद्ध जो पर्दापछाडि लडिदैं छ | Pennepal
Home बिचार कोरोना संकट ः एउटा युद्ध जो पर्दापछाडि लडिदैं छ
विश्व महामारीका बेला एउटा युद्ध चीन र अमेरिकाबीच सुरु भएको छ । यो युद्धमा दुवै देशका धेरै कुरा दाउमा राखिएको छ । चीन बिश्व नेता बन्ने प्रयासमा छ भने अमेरिका संसारको सिपाहीको हैसियत गुमाउन नचाहेको देखिदैछ ।
विश्वका लागि यो पक्कै राम्रो समय होइन । अमेरिका चीनबीच आपसी नाता पनि राम्रो छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति कोरानो भाइरसलाई बारम्बार ‘चीनियाँ भाइरस’ भनिरहेका छन् । उनका आक्रामक विदेशमन्त्री माइक पाम्पाओ यसलाई ‘उहान भाइरस’ भन्छन् । अमेरिकाको यस किसिमको न्वारनबाट चीन खुसी छैन ।
अमेरिकाको गलत निर्णय र चीनको सूझबूझ
अमेरिकार चीनबीच जारी यो युद्ध बोलीमा मात्र सीमित छैन । केही महत्वपूर्ण घटना यसबीच भएका छन् । यही महिनाको सुरुवातमा अमेरिकाले इटालीसहित युरोपिय देशका लागि आफ्नो सीमा नाका बन्द गरिएको घोषणा गर्यो भने चीनले त्यही बेला इटालीमा आफ्नो मेडिकल टिम पठाउन लागेको घोषणा गर्यो । इटाली यसबेला कोरोना ठूलो मारमा परेको छ । चीनले इरान र सर्वियामा पनि आफ्नो मेडिकल टिम पठाएको छ ।
विश्वलाई देखाउने हिसावले यो धेरै ठूलो कुरा हो । यसले यो पनि देखियो की कसरी पर्दा पछाडि यी दुई देश भिडिरहेका रहेछन् भनेर । चीन यो कठिन समयमा विश्वसामु आफूलाई एउटा नेताकारूपमा उभ्याउन चाहन्छ । अहिले यो देखिदैछ की यो युद्धमा चीनको तुलनामा अमेरिका पछाडि परेको छ ।
यो युद्धमा एउटा सानो घुम्ती अमेरिकी एयरफोर्स मेडिकल सुविधा ढिलो गरी इटाली पठाइएको कुरा कसैले याद नगरेको हुन सक्छ । यसले विश्वका देशको प्रशासनिक र राजनीतिक व्यवस्थाहरूको योग्यता, दक्षताको परीक्षा भइरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको लडाईमा नेतृत्वनै सबैकुरा हो । यो संकटको घडीमा उनीहरूले कस्तो काम गरे ? परिस्थितिलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरे भनेर भविश्यमा नेताहरूलाई मान्ने आधार हुनेछ । यो हेरिनेछ की यी नेताले कसरी आफ्नो देशको प्रविधि र श्रोतको प्रयोग गरेर यो महामारीलाई रोके ।
विश्व अर्थ व्यवस्थामा चीनको दबदबा हुनेछ !
यो महामारी यस्तो बेलामा फैलिएको छ, जब अमेरिका र चीनको दूरी पहिल्यैदेखि नराम्रो भइरहेको छ । आंशिकरूपमा भएको व्यापार युद्धको तनाव कम गर्न दुवै देश सक्षम भएका थिए तर, दुवै देश (चीन र अमेरिका) फेरि हतियार होडवाजीमा जुटेका छन् । दुवै देश भविश्यमा एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा हुने कुनै भिडन्तका लागि आफूलाई तयार राख्न जुटेका छन् ।
चीनले आफूलाई यस क्षेत्रमा सैन्य सुपरपावर प्रमाणित गर्न सफल भएको छ । अब चीनलाई लाग्दैछ की अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा एउटा ठूलो भूमिका निभाउने समय आएको छ । यस्तो अवस्थामा यो महामारीबाट छुटकारा पाउन नेतृत्व गर्नेको र छुटकारा पाइसकेपछिको विश्वमा भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ । जब यो भाइरसबाट विजय हासिल हुनेछ तब आर्थिकरूपले थलिएको विश्वमा यसलाई उभ्याउन चीनको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
चीनको सहयोग जरुरी
अहिले कोरोना भाइरससंग लडन चीनको सहयोग अत्यन्त जरुरी छ । मेडिकल डाटा र अनुभवलाई आदानप्रदान गर्नु जरुरी छ । चीन मेडिकल सामग्री, मास्क, सुरक्षित पोशाक र डिस्पोजेवल वस्तुको ठूलो निर्यातक पनि हो । संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा सम्लग्न टीम र यो भाइरसविरुद्ध काम गर्ने अन्यका लागि पनि यो वस्तु निकै महत्वपूर्ण हो । अहिले ठूलो मात्रामा विश्वलाई यसको आवश्यकता छ ।
यो कुराको चीनसंग धेरै उद्योग र वर्कशप छन् । चीनबाहेक अन्य देशसंग यसको उत्पादन रातारात बढाउने ल्याकत पनि छैन । चीन आफ्नो यो क्षमता भजाइरहेको छ । अर्कोतिर ट्रम्पले यो अवसर गुमाएको उनका आलोचकहरू बताउछन् । ट्रम्प प्रशासनले सुरुमा यो संकटको गम्भीरता बुझ्नै सकेनन् । उनी ‘पहिलो अमेरिका’ को नारालाई विश्वसामू घन्काउने यो एउटा अवसरलाई गुमाउन पुगे । यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा दाउ लागेको भनेको ग्लोवल लिडरसिप हो ।
एशिया मामलाका दुई विशेषज्ञ कर्ट एम क्याम्पवेल, जो ओवामा प्रशासनका समय पूर्वी एशिया र प्रशान्त मामलाका विदेश उपमन्त्री थिए र रश दोषीले ‘फारेन अफेयर्स’ नामको आफ्नो हालैको आर्टिकलमा लेखेका छन् ‘ विगत सात दशकमा ग्लोवल पावरका रूपमा अमेरिकाको दर्जा पूंजी र शक्तिका भरमा मात्र उभिएको थिएन, यो अमेरिकाको घरेलु प्रशासनको वैधानिकता, संसारका सार्वजनि वस्तुका प्रावधानहरू र संकटको समय तिब्र गतिले काम गर्ने एवं सहयोगी भावनाको आधारमा उभिएको थियो ।’
उनीहरूको भनाईमा कोरोना भाइरसको महामारी ‘अमेरिकी नेतृत्वमा यी तीनै तत्वको परीक्षा भइरहेको छ । अहिलेसम्म वासिंगटन यो परीक्षामा असफल भएको छ । अर्कोतिर जब वासिंगटन अफसल भयो वेइजिङले तिब्र गतिमा आएर अमेरिकी गल्तीको फाइदा उठाइरहेको छ । महामारीका समय रेन्पोन्समा बनेको रिक्त स्थितिमा उसले आफूलाई विश्व नेताका रूपमा उभ्याउन चाहन्छ ।’
प्रचार युद्धमा पनि अघि देखियो चीन
मौका परस्त हुन सजिलो छ । कतिपय शायद यो सोचेर आश्चार्यमा परेका होला, यस्तो बेलामा पनि चीनले कसरी आफ्नो फाइदा सोच्न सकेकने होला ! क्याम्पवेल र दोषी यसलाई ‘चुत्पा’ को संज्ञा दिन्छन् । किनभने चीनमै यो भाइरसको सुरुवात भएको देखिएको छ । उहानमा विकसित भएको यो संकटको सुरुमा वेइजिङको रेस्पोन्स गोप्य थियो । यद्यपी यसपछि चीनले आफ्नो विशाल संसाधनहरू प्रभावकारीरूपमा यसमा होम्यो ।
पिइएन अमेरिकाकी कार्यकारी प्रमुख सुजेन नोसेलले फोरेन पोलिसी वेबसाइटमा उउटा आर्टिकल लेखेकी छन् ‘चीनलाई यो कुराको डर थियो की यस संकटलाई अस्वीकार गर्दा वा अव्यवस्था हुँदा ठूलो संख्यामा असनतोष पैदा हुनेछ । यस्तोमा चीनले ठूलो संख्यामा आक्रमक ढंगले घरेलु र विश्वव्यापी प्रचार अभियान थाल्यो । योमार्फत उसले विरामीको पिडा लुकाउन र यो विरामीलाई विश्वव्यापी फैलाउन आफ्नो भूमिका ढाकछोप गर्न प्रयास गर्यो । योसंगै चीनले पश्चिमा त्यसमा पनि खासगरी अमेरिकाको तुलनामा आफ्नो राम्रो छवि भएको प्रदर्शन गर्यो ।’
के विश्व समिकरण बदलिदैं छ ?
कयौं पश्चिमा टिप्पणीकार चीनलाई धेरै तानाशाही भएको र धेरै राष्ट्रवादी भएको देख्छन् । उनीहरूलाई महामारीको असरमा यो रुझान अझै तिब्र गतिमा बढनेछ । तर वासिंगटनको ग्लोवल लिडरको दर्जा महामारीको असरको तुलनामा धेरै नहुन सक्छ । अमेरिकाका सहयोगी यसमा दृष्टि लगाइरहेका छन् । उनीहरू खुल्लारूपमा ट्रम्प प्रशासनको विरोध गर्न त सक्दैनन् तर, यसमा कतिपय देश चीनप्रति अमेरिकाको व्यवहार मन पराउदैनन् । यसमा चाइनिज प्रविधि (हुवावेविवाद) र इरानका साथै अन्य क्षेत्रिय विषय सामेल छन् ।
चीन यस महामारीको समयमा आफ्नो पहुँचको प्रयोग गरिहेको छ । ऊ भविश्यको नाताका लागि एउटा मानक तयार पार्न खोज्दैछ । यसमा एउटा यो हुन सक्छ चीन तिब्ररूपमा संसारका लागि आवश्यक शक्ति बनेको छ । कोरोविरुद्धको लडाइमा छिमेकीहरू जापान र दक्ष्णि कोरियासंग भएको गठवन्धन र युरोपिय देशमा पठाइएको स्वास्थ्य सामग्रीलाई यसैसंग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
के अमेरिकाका लागि यो ‘स्वेज मुभमेन्ट’ सावित होला ?
क्याम्पवेल र दोषी आफ्नो फोरेन अफेयर्समा लेखेको आर्टिकलमा यसको तुलना बेलायतको पतनसंग गर्छन । उनीहरूले भनेका छन् ‘स्वेज क्यानलमा कब्जा गर्ने १९५६ को प्रयास असफलतासंगै बेलायतको विश्व शक्रिको दर्जा समाप्त भएको थियो ।’ उनीहरू लेख्छन् ‘आज अमेरिकी सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ की यदी अमेरिका यो समयको आवश्यकतालाई पुरा गर्न असफल रह्यो भने कोरोना भाइरस अमेरिकाका लागि एउटा स्ेजको घटना सावित हुनेछ ।’
चिनमा कोरोना नसकिदै हान्टा भाइरसको डर
कोभिड –१९ विश्वका लागि अन्तिम महामारी होला !